Huawei dia hanana ny rafitra fiasan-dry zareo amin'ity fararano ity | Androidsis
Ny rafitra fiasan'i Huawei dia ho vonona amin'ny fararano
Huawei no be mpiorina indrindra amin'ity herinandro ity. Roa andro lasa izay dia voamarina fa mijanona ny marika sinoa tsy misy fanavaozana Android amin'ny findainy, ankoatry ny fahitana ny fampiharana sy serivisy Google voasakana amin'ny maodely manaraka. Toe-javatra sarotra, fa ny iray izay ao amin'ny tetezamita, ankehitriny dia manana ny orinasa fiatoana telo volana eo ho eo. Noho io antony io dia miomana ny hampiasa ny rafitra fiasany manokana amin'ny findainy ny orinasa.
Volana roa lasa izay noho i Huawei mihitsy nanamafy fa efa manana ny rafitra fikirakirany manokana izy ireo. Rafitra miasa izay anombohanao ho tsaho, fa efa fantatsika ny fotoana hahatongavany amin'ny fomba ofisialy. Satria antenaina fa amin'ity fararano ity dia ho vonona izy ary hiasa amin'ny telefaona marika.
Ny anaran'ity rafitra miasa ity dia mijanona ho tsy ofisialy. Misy ny haino aman-jery milaza fa Kirin OS io, na dia manana anarana sinoa hafa aza ny haino aman-jery hafa. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy miandry ny orinasa irery isika hamela antsika amin'ny angona bebe kokoa amin'ity lafiny ity. Ny fantatray dia ny fanombohana azy amin'ity taona ity. Nanamafy ny talen'ny CEO an'ny Huawei.
Inona no mitranga amin'ny Huawei-ko ankehitriny rehefa lany Android
1 Fandefasana ny rafitra miasa Huawei
2 Fifanarahana fampiharana Android
Fandefasana ny rafitra miasa Huawei
Ny tale jeneralin'ny orinasa dia efa nanamafy izany ity rafitra miasa ity dia ho tonga amin'ny fararan'ity taona ity. Ity no vinavinan'ny orinasa, na dia mety hisy aza ny fahatarana, satria tsy maintsy manao fitsapana isan-karazany izy ireo. Raha izany dia azo hahemotra izy mandra-pahatongan'ny lohataona amin'ny taona manaraka. Na dia toa tsy izany aza no izy. Tao anatin'ny volana vitsivitsy dia tokony ho ofisialy amin'ny faran'ity taona 2019 ity.
Ity rafitra fiasan'ny Huawei ity dia hifanaraka amin'ireo karazana fitaovana rehetra. Azo ampiasaina amin'ny finday finday, solosaina, takelaka, fahitalavitra ary koa fitafiana azo ampiasaina. Amin'izany fomba izany, ny fitaovana rehetra ananan'ny orinasa eny an-tsena dia afaka mampiasa azy io. Ary ireo an'ny marika Honor dia afaka mampiasa azy, toy ny tranga hatreto. Ny orinasa araka izany dia manolotra konsep mitovy amin'ny an'ny Fuchsia OS, rafitra fiasa ho an'ny fitaovana rehetra.
Betsaka ny tsaho momba ity rafitra fiasan'ny mpanamboatra ity. Satria misy haino aman-jery milaza izany dia hifanaraka amin'ireo rindranasa Android. Mba hahafahan'ny mpampiasa manohy manana fidirana amin'ireo fampiharana ireo amin'ny finday avo lenta amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, ireo rindranasa ireo dia azo averina atambatra, mba hahafahan'izy ireo mampifanaraka amin'ny fomba tsara kokoa amin'ny rafitra fiasa Huawei. Ity dia zavatra mamela ny fampisehoana tsaratsara kokoa amin'izy ireo. Ny tsaho sasany dia manondro ny fanatsarana fahombiazana 60%. Na dia tsy zavatra voamarina aza izany.
Ahoana ny fomba hanafenana ny fanamarihana amin'ny telefaona Huawei sy Honor anao
Fifanarahana fampiharana Android
Iray amin'ireo lakile ao amin'ity rafitra fiasa Huawei ity dia voalaza fa mifanentana amin'ireo rindranasa Android. Tsy ho an'ny an'ny Google izany, noho ny fanakanana voalaza. Ho fanampin'izay, tsy maintsy tsiahivina fa ny Google Play dia tsy azo ampiasaina amin'ireo telefaona ireo. Noho io antony io dia tsy maintsy manana fivarotana fangatahana azy ireo finday marika Sinoa. Ity dia zavatra efa hain'ny mpampiasa miaraka amin'ny smartphone an'ny marika.
Momba ny AppGallery, efa napetraka ao amin'ny telefaonan'ny orinasa izany, farafaharatsiny ao amin'ireo telefaona farany. Fivarotana iray ahafahanao misintona fampiharana amin'ny telefaoninao. Huawei dia tsy maintsy miasa ihany koa amin'ny fananganana mpamorona handefa ny fampiharana ao amin'ity magazay ity, hahafahan'izy ireo misintona amin'ny finday avo lenta. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika raha zavatra ity dia handeha soa aman-tsara.
Betsaka ny fanontaniana tsy voavaly amin'io lafiny io. Andro somary sarotra ihany izy ireo, izay ahatongavan'ny vaovao marobe. Na dia mety manampy be aza ity vanim-potoana fialantsasatra ity afaka manana fampahalalana marina kokoa momba ny fomba fivoaran'ity toe-javatra ity mandritra ireo volana ireo. Manantena ny handre bebe kokoa momba ny fomba hampidiran'ny Huawei ny rafitra fiasany manokana izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny rafitra fiasan'i Huawei dia ho vonona amin'ny fararano
Toy izao no hijerena ireo doka ao anaty WhatsApp
Ny Honor 20 sy 20 Pro dia efa zava-misy: holazainay aminareo rehetra ny momba ny hajia vaovao an'ny marika!